पुनर्निर्माण भएन साततले दरबार- प्रदेश ३ - कान्तिपुर समाचार
पुनर्निर्माण भएन साततले दरबार
मंसिर २३, २०७५ कृष्ण थापा
नुवाकोट — यहाँका पुरातात्त्विक सम्पदा दिनानुदिन भत्किँदै र खण्डहरमा परिणत हुन लाग्दासमेत सरोकारवाला निकायले अझैसम्म चासो लिएको छैन ।
नुवाकोटका सम्पदा पुननिर्माण नहुँदा खण्डहरमा परिणत हुने अवस्थामा । तस्बिर : कृष्ण/कान्तिपुर
पुरातात्त्विक साततले दरबार लगायतका वरिपरिका संरचना पुनर्निर्माणको सट्टा कुनदिन ढल्छ भन्ने स्थानीयवासीमा त्रास बढेको छ । ‘दरबार कुन दिन ढल्छ भनेर हेरेर बसेका छौं,’ स्थानीय सुरेन्द्रकुमार शाहीले भने, ‘कति पटक पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशकलाई भनियो, भैरवी मन्दिर जाने भक्तजनलाई
झिँगटी र इँटा खसेर लाग्न सक्छ भनेरछिटो बनाउनु पर्‍यो भनेर कयौंपटक भन्यौं । भन्दाभन्दै थाकिसक्यौं ।’
नुवाकोट भन्नासाथ यही नुवाकोट साततले दरबारलाई चिनिन्छ । ‘यही रहेन भने के हेर्ने ?’
स्थानीयवासी शाहीले भने, ‘नुवाकोटको चिनो भनेर दरबारको फोटो अतिथिलाई दिने चलन छ । त्यसपछि के दिने ? पुर्खाको सम्पत्ति जोगाउन सकेनौ भनेर इतिहास मेटिन्छ ।’
चीन सरकारले यही कात्तिक–मंसिरमा पुनर्निर्माण थाल्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नभएको स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय, संग्रहालयका कार्यालय प्रमुख अर्जुनप्रसाद फुयालले बताए ।
‘अझै केही जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । गत भदौमा चिनियाँ प्राविधिकले दरबारको सर्भे गरेका थिए । दरबारको डीपीआर तयार भइसकेको र लागत इस्टमेट चीन सरकारले तयार पार्दै गरेको जानकारी कार्यालयले पाएको छ । दरबारको पूर्वपट्टि नारायण र विष्णु मन्दिर, बग्दै गरेको तादी नदी र डाँडाकाँडा, पश्चिम तलतिर सुसाइरहेको त्रिशूली नदी, बजार र सामरी भन्ज्याङ डाँडाहरू ।
पुननिर्माणको पर्खाइमा साततल्ले दरबार । तस्बिर : कृष्ण/कान्तिपुर
उत्तरपट्टिकालिका मन्दिर, गणेश हिमाल,भग्नावशेष पाँचतले तुलजा भवनी दरबार, भत्किएका मल्लकालीन रंगमहल रगारदघर भवन सहितका पुरातात्त्विकसम्पदाका दरबार छन् । प्यागोडा शैलीमा निर्मित उक्त दरबार २०७२ सालवैशाख १२ गतेको भूकम्पले गर्दा टेकोलगाएर राखिएको छ । पूर्वीद्वार भएको दरबारलाई केही इतिहासकारले नौतलेभएको बताउँछन् ।
१९९० सालको महाभूकम्पले दरबारको माथिल्लो भाग खसेपछि श्री ३ महाराज जुद्ध शमसेरको पालामा सात तलामा सीमित भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले १८१७–१९ भित्रमा ललितपुरबाट कालिगढ झिकाएर दरबार बनाउन लगाएको इतिहास छ । काठमाडौंबाट ७५ किमि उत्तर र सदरमुकाम विदुरबाट ६ किमि दूरीमा विदुर नगरपालिका २ मा साततले दरबार रहेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७५ ०७:५२
महायज्ञबाट २० करोड उठाउने लक्ष्य
मंसिर २३, २०७५ रमेशकुमार पौडेल
चितवन — भरतपुरको पुरानो मन्दिर गणेशस्थानलाई धाम बनाउन आर्थिक संकलन गर्ने उद्देश्यले शनिबारदेखि महायज्ञ सुरु भएको छ । भरतपुर बाइपास रोडदेखि केही भित्र रहेको गणेशस्थानमा ८० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भव्य धाम बनाइँदै छ ।
महायज्ञबाट २० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको यज्ञ आयोजक समितिका संयोजक दिनेशकुमार चुकेले जानकारी दिए । जुन रकम पहिलो चरणको कामलाई खर्च हुनेछ ।
प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले महायज्ञको उद्घाटन गरे । गणेशस्थानलाई धाम बनाउने बारेको योजना सुनेरै प्रदेश सरकारले ९० लाख रुपैयाँ बजेट दिएको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । प्रदेश सरकारले धामलाई पूर्ण बनाउन थप बजेटको व्यवस्था गर्ने उनले आश्वासन दिए ।
गणेशस्थानको नजिकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवघाट पनि छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले देवघाटसँग यो धामलाई पनि जोड्न सुझाव दिए ।
‘देवघाटधाम हिन्दुहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो । नेपालका मात्रै नभएर भारतीय श्रद्धालुहरू यहाँ आउँछन् । यसको व्यपाक प्रचार भए धेरैभन्दा धेरै धार्मिक पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । देवघाटसँग गणेशधामलाई पनि जोडेपछि यहाँको पर्यटनले फड्कोमार्छ’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।
भरतपुर महानगरपालिका–११ भोजाडमा रहेको गणेश मन्दिर पाल्पाली सेनवंशी राजाको पालामा बनेको विश्वास छ । यस ठाउँमा वि.सं. २०१४ सालमा स्थानीयले रुखको फेदमा गणेशको अर्धकदको मूर्ति फेला पारेका थिए । त्यसपछि यहाँ नियमित पूजा हुँदै आएको छ ।
अहिले पनि विवाहलगायत गणेशसँग सम्बन्धित धार्मिक कार्यका लागि यो मन्दिरमा आउने भक्तहरू धेरै नै छन् । ०६४ सालमा गणेशस्थान मन्दिर संरक्षण समिति गठन भएपछि चहलपहल झनै बढेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
यो मन्दिरसँग अहिले साढे दुई हेक्टरको हाराहारीमा जमिन छ । तर ३० हेक्टर जमिन लिएर गणेशधाम बनाउन लागिएको हो । यसका लागि आडैमा रहेको नवजागृति र जलदेवी सामुदायिक वनसँग सहकार्य गरेर क्षेत्र विस्तार गरेको गणेशस्थान मन्दिर संरक्षण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका दिनेश चुकेले बताए । यो क्षेत्रमा २५ बिघाको तलाउ र त्यसको बीचमा गणेशको मूर्ति रहनेछ । तलाउका साथै गणेशको मूर्ति अन्यत्र पनि रहनेछ ।
‘एउटा ३० फिट अग्लो गणेशको विशाल मूर्तिी राख्नेछौं । शिव–पार्वती बस्ने कैलाश पर्वतको स्वरूप बनाएर त्यहाँ पनि गणेशको मूर्ति रहनेछ,’ गुरुयोजनाका बारेमा बताउँदै चुकेले भने । मृग र हात्तीका मूर्तिहरू बन्नेछन् । विवाह लगायतका अन्य धार्मिक काम गर्न सभा भवनहरू बन्नेछन् । जलाशयको वरपर साइकल र पैदल हिँड्ने मार्ग बनाइने चुकेले जानकारी दिए ।
गणेशस्थान पवित्र धामिक क्षेत्र देवघाटदेखि पाँच किलोमिटर मात्रै टाढा छ । ‘भौतिक संरचनाहरू व्यवस्थित भएको आध्यात्मिक क्षेत्रको रूपमा गणेशधामलाई विकास गर्ने योजना हो । देवघाट, लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुर जाने पर्यटकहरू, तीर्थयात्रीहरू पनि यहाँ पसेर मग्न हुनेछन्,’ समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले भने । पण्डित दीनबन्धु पोखरेलले पुराण भन्ने महायज्ञ २९ गतेसम्म चल्नेछ ।
प्रकाशित : मंसिर २३, २०७५ ०७:५०